NCA Yokurudzira Kusashungurudzwa kweVanhukadzi
Zvita 03, 2010
Sangano rinorwira kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika, reNational Constitutional Assembly, kana kuti NCA, raparura neChishanu chirongwa chekurwisana nemhirizhonga yakanangana nemadzimai. NCA inoti madzimai mazhinji akashungurudzwa zvikuru musarudzo dzapfuura uye haidi kuti madzimai ashungurudzwe zvakare pachaitwa referendamu nesarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa gore rinouya.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi, sachigaro veNCA, VaLovemore Madhuku, vati madzimai akashungurudzwa zvikuru musarudzo dzakapfuura, nokudaro vaona zvakakodzera kuti vatange kudzidzisa vanhu pamusoro pemaipiro akaita mhirizhonga.
VaMadhuku vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti awone kuti hapazove zvakare nemhirizhonga pachaitwa referendamu pamwe nesarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa gore rinouya. Vadzokorora zvakare kuti sangano ravo richashanda zvakasimba kuita kuti vanhu varambe bumbiro idzva iro riri kunyorwa richitungamirwa nekomiti yeparamende yeCopac vachiti bumbiro iri haricherechedze zvido zveveruzhinji asi zvemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende.
VaMadhuku vati sangano ravo richatenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji nezvehurongwa hwavo.
Mumwe ataura pakuparurwa kwechirongwa ichi uye vari nhengo yeparamende yeMDC-T, Amai Lucia Matibenga, vakurudzira madzimai ose ari munyika kuti abatane pakurwira kodzero dzavo vachiti vanhukadzi ndivo vakawanda munyika, nokudaro vanofanira kushandisa simba rehuwandu hwavo kuti zvavanenge vachida zviitwe.
Mumwe anorwira kodzero dzevanhu ku South Africa, Muzvare Venetia Govender, avo vataurawo pamusangano uyu, vati South Africa, samutongigava pagakava riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika muhurumende yemubatanidzwa, inofanira kuongororawo nyaya dzakaita sedzemhirizhonga pamwe nekutyorwa kwedzimwe kodzero dzeveruzhinji, kwete kupedzera simba rayo mukusawirirana kwevari muhurumende iyi.
Musangano uyu wapindwa nemadzimai anosvika zana ayo abva kumatunhu ose enyika. Vapinda musangano uyu vakurudzira hurumende kuti iwone kuti vose vakashungurudza vanhu vasungwe vachitongwa nemhosva dzavakapara. Vati izvi ndizvo zvinoita kuti chirongwa chekupodza maronda chikwanise kubudirira munyika.